ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း Archives - Page 10 of 185 - Myanmar Fire Services Department
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ ရွာထောင်ရပ်ကွက်တွင် သစ်ပင်လဲကျမှုသတင်း
editor | Nov 3, 2020 | News, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
၂.၁၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၁၅ ၄၀ အချိန်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ ရွာထောင်ရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်း- မုံရွာကားလမ်းမကြီးဘေး၊ လမင်းသာ စားသောက်ဆိုင်အနီးတွင် မိုးသည်းထန်းစွာရွာသွန်းမှုကြောင့် လုံးပတ်(၅)ပေခန့်ရှိ စိန်ပန်းပင် လဲကျ၍ လမ်းပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပွားကြောင်း...
Tree fallen in Minbuu township, Magway region
editor | Nov 2, 2020 | News, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
Nov 1 2020, about 10 30, two mango trees which have approximately 30 ft in height and3ft in girth fell down on the house after the heavy rain and caused damage. That accident was happened at the No3ward, Minbuu township, Magway region. As soon as the report was...
Tree fallen in Myaing township, Magway region
Nov 1 2020, about 09 40,abig acacia tree which has 20 ft in height and5ft in girth fell down onto the road due to the soft and wet soil after the heavy rain and blocked the traffic. It was happened near Alalkan village, Alalkan village tract, Myaing township,...
Page 10 of 185« « Previous...89101112...203040...Next »